Tinao ho sitrana ve ny atinao ? Inona avy ny vahaolana? – Sombiniaiko
Tinao ho sitrana ve ny atinao ? Inona avy ny vahaolana?
19 juillet 2019 19 juillet 2019 antso 0 Comment
Tsy maintsy mifototra amin’ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana tsara no antoka hanatsarana ny aty sy ny hahasalama azy.
-Ny tongolo gasy
Mampihena ny menaka ratsy izy io, io menaka ratsy izay mahatonga ny tsy fahatomombanan’ny aty. Misy ilay singa « allicine » sy «sélénium » izay manana fahafahana miaro ny aty amin’ny voka-dratsin’ny poizina.
Mamono ny singa mety mahavoa ny homamiadana sady mamono ny poizina ao amin’ny aty ny ranona papelimosy. Misy singa antsoina hoe « naringénine » ao anatiny, izay manampy ny aty amin’ny fandoroana ny menaka tafiditra ao anaty.
Feno « glutathion » ity legioma ity. Tsara hanina manta indrindra raha ampiarahina amin’ny motarda. Sady tsy lafo no tsy sarotra atelina.
-Ny dite maitso
Ny dite maitso dia ahitana ilay singa antsoia hoe « catéchine » izay manakana ny fanangonan’ny vatana menaka ao amin’ny aty. Ezahina ny mba hisotroana ny dite maitso in-telo isan’andro mba hahazoana ireo tombotsoa entiny.
Manampy ny vatana handevona ny menaka sady mamporisika ny aty hamokatra ranon’afero tsara ny tamotamo. Sakafo matanjaka amin’ny fanadiovana ny ao anaty izy ity. Manasitrana ny sela marary
Mihinana voankazo sy legioma isan’andro, indrindra ireo tena manampy manadio ny aty : paoma, voaloboka, cerise, « épinards », artisao, « asperges » sy « radis ».
Tsy mihinana sakafo notahirizina ela loatra tao anaty vata fampangatsiahina.
Fadiana ny misotro toaka na zava-pisotro mamy loatra sy misy entona matetika.
Ezahina ihany koa ny mba hihinanana sakafo misy « antioxydants », voasary laoranjy, voasarimakirana, voatabia, tongolo.
Mila karakaraina arak’izay azo atao ny aty fa anisan’ny singa iray lehibe mandavorary ny fahasalaman’ny vatantsika.
Etsy ankilan’izay, tsy ny aty ihany anefa no ilaina karakaraina fa ny vatana manontolo mihitsy?
← Ireo fomba mampiteraka na mampipetraka ny zaza ao am-bohoka
Bébé de la semaine 10 →